နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဘိုးတော်နဲ့ မော်ဒယ်ဗွီဒီယိုဖိုင် ပျံ့နှံ့မှု » Myanmar Family Life
အဖိုး မဟာမုနိ လို့နံမည်ကြီးခဲ့တဲ့ထိုင်း ဘိုးတော် လူထွက်တစ်ဦးကို အွန်လိုင်း ကနေ မော်ဒယ်တစ်ဦးနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနိုးဆွ ရုပ်သံကို တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်ကာ အွန်လိုင်းဂိန်းကစားကြဘို့ကြေငြာ ထုတ်ခဲ့လို့ဒီကနေ့နံနက်ပိုင်းမှာ….
May 15,2019။ ။
အဖိုး မဟာမုနိ လို့နံမညျကွီးခဲ့တဲ့ထိုငျး ဘိုးတျော လူထှကျတဈဦးကို အှနျလိုငျး ကနေ မျောဒယျတဈဦးနဲ့လိငျပိုငျးဆိုငျရာနိုးဆှ ရုပျသံကို တိုကျရိုကျ ထုတျလှငျ့ကာ အှနျလိုငျးဂိနျးကစားကွဘို့ကွငွော ထုတျခဲ့လို့ဒီကနနေံ့နကျပိုငျးမှာ….
နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဘိုးတ္နောဲ့ မ္ဒောယ္ဗြီဒီယိုဖိုင် ပ်ံ့နွံ့မှု
အဖိုး မဟာမုနိ လို့နံမည်ကြီးခဲ့တဲ့ထိုင်း ဘိုးတော် လူထြက္တစ်ဦးကို အြန္လိုင်း ကေန မ္ဒောယ္တစ်ဦးနဲ့လိင္ပိုင်းဆိုင်ရာနိုးဆြ ရုပ်သံကို တိုက်ရိုက် ထုတ္လွှင့္ကာ အြန္လိုင်းဂိန်းကစားကြဘို့ကျြေငာ ထုတ္ခဲ့လို့ဒီကေန့နံနက္ပိုင်းမွာ….
ထိုင်းရဲတပ္ဖြဲ့က ဘိုးတ္လောူထြက္နဲ့မ္ဒောယ်အမ်ိုးသမီးကို ဖမ်းဆီး လိုက်ပြီး အမှုနွစ္ခုနဲ့တရားစြဲလိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ်။
ခုလို အြန္လိုင်းဆိုင်ရာ ထိမ်းခ်ုပ္မှု ဥပေဒအရ ခုလိုအမှုကို ထောင္ဒဏ် (၅) နွစ်အထိ အျပစ်ပေးနိုင္ပါတယ်။